12 लागि परिणाम one piece
एक टुक्रा Gallant लडाकू
तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् रूपमा यो तपाइँको रूपमा लामो हुनेछ तिमी मेरो धन चाहनुहुन्छ?! गोल्ड डी रोजर गरेको गरे शब्दहरू केटाहरू सबै तातो-लाग्यौं र समुद्रलाई फ्लस! Luffy तिनीहरूलाई मध्ये एक छ। उहाँले एक Piece.His यात्रा बस थाल्नुभएको छ धेरै कठिनाइ पार गर्न छ।
बम ठाँउ र यो मारियो खेल मा आफ्नो आफ्नो विरोधीको अप झटका प्रयास
सुपर मारियो महल
Bowser को मुख्य महल को एक प्रविष्ट गर्न मारियो। अब तपाईं pesky koopas र अन्य जाल परहेज शीर्ष चढ्नुहोस् पर्छ। राजकुमारी पीच फेरि उद्धार।
Spongebob प्रेम ह्यामबर्गर
Spongebob परिवार एक खाने ह्यामबर्गर प्रतियोगिता, एक विजेता हुनेछ जसले आयोजित? Spongebob को contest.have मजा समाप्त मदत!
बनाम प्रेत Ninjas
को लाश मा चिनियाँ तारा फेंक तपाईं प्रयास र तिनीहरूलाई सबै बाहिर ले रूपमा।
मारियो ट्रक रोमांचक
मारियो फिर्ता र अर्को ट्रक साहसिक मा के अनुमान, को मशरूम छुटकारा र छिटो गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा त्यहाँ, तपाईं कसरी राम्रो गर्न सक्छन् हेर्न!
श्री। bree - फर्केपछि घर
श्री Bree आफ्नो स्मृति गुमाए र घर बाटो बिर्से छ! अब तपाईं Gotta उहाँलाई घर फर्काउन मद्दत! भनेर लागि, श्री Bree आफ्नो भूल आन्दोलन कौशल पुन, र सबै लागत गर्दा hopi मा मृत्यु परहेज, को गहिरो र deadliest स्थानहरू मार्फत यात्रा गर्न आवश्यक
आफ्नो beastly बल्लेबाजी कौशल तिनीहरूलाई भन्दा कचौरा! सफलतापूर्वक बल हान्न सही समयमा हाइलाइट तीर थिच्नुहोस्। आफ्नो मनपर्ने टोली, ओभरमा को इच्छित नम्बर छान्नुहोस् र खेल जित्न गर्न विरोध टोलीका स्कोरलाई!
जनी औंठी फुटबल च्याम्पियन
जनी ब्रावो केही फुटबल कौशल ... जनी सकेसम्म धेरै लक्ष्य स्कोर सहायता गर्यो। तपाईं 10 संभावना गर्न सक्छन् तपाईं सकेसम्म धेरै लक्ष्य स्कोर छ। हरेक लक्ष्य तपाईं 100 अंक, बोनस ROUND खेल्न 800 अंक स्कोर दिन्छ। यूरो प्ले 2012 खेल!
निन्जा सुपर सवारी
यो चुनौतीपूर्ण सडक संग मोटरबाइक सवारी।